CHIMANIMANI, Zimbabwe (AP) — The Latest on the aftermath of Cyclone Idai in southern Africa (all times local): 8:40 p.m. Reports from the United Nations and African governments say Cyclone Idai's death toll has risen to over 550 people.
Motorcycles pass through a section of road damaged by Cyclone Idai in Nyamatanda about 50 kilometres from Beira, in Mozambique, Thursday March, 21, 2019. Some hundreds are dead, many more still missing and thousands at risk from massive flooding across the region including Mozambique, Malawi and Zimbabwe caused by Cyclone Idai.
A vehicle is submerged in floodwater after it got swept away by Cyclone Idai in Nyamatanda about 50 kilometres from Beira, in Mozambique, Thursday March, 21, 2019. Some hundreds are dead, many more still missing and thousands at risk from massive flooding across the region including Mozambique, Malawi and Zimbabwe caused by Cyclone Idai.
A helicopter carries various food stuffs and supplies in Nyamatanda about 50 kilometres from Beira, in Mozambique, Thursday March, 21, 2019. Some hundreds are dead, many more still missing and thousands at risk from massive flooding across the region including Mozambique, Malawi and Zimbabwe caused by Cyclone Idai.